Olee otú ịgwa ma ọ bụrụ mbanye mebiri emebi azọpụta dị mkpa faịlụ
E nwere ọtụtụ iri puku ihe ịrịba ama na gbapụta ka anya dị ka ike mbanye bụ mmekwata. A onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na draịvụ ike na-abụghị nanị dochie ASAP ma dị mkpa faịlụ na-azọpụta nke bụ n'ezie mkpa na ina nke fọrọ nke nta% ndị ọrụ chọrọ ha draịva ina gbanwere. Na-ike mbanye na kwesịrị ekwesị iji bụ ihe na-bụ mkpa nke hour dị ka ọ na-eme dị ka a Central ehiwe maka kọmputa n'elu nke ndụ ya na ndị ọzọ niile na ọrụ dabeere na ha. -Esonụ bụ ụfọdụ nke ihe ịrịba ama nke hụ na draịvụ ike na-na-nwụrụ anwụ na nnọchi kwesịrị mere:
Kọmputa slows ala na-acha anụnụ anụnụ na ihuenyo ọnwụ na-egosi ọbụna ma ọ bụrụ echichi na-mere na nso nso nke pụtara na ngwaike gwụsịrị nọgidere nke a na-metụtara ike mbanye fọrọ nke nta 95% nke ikpe.
Ọ bụrụ na ndị data ọ na-emerụ mgbe faịlụ na awụnyebeghị enweghị ihe ọ bụla njehie ma ọ bụ nke na-ihu n'ụdị faịlụ ofufe mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị kpọrọ eche banyere ike mbanye mgbanwe dị ka ọ bụ ndị na-akpata n'azụ nsogbu a.
Bad oru ruru abawanye bụ ihe ịrịba ama ọzọ na-metụtara ike mbanye ọdịda. Ọ pụtara na ihe bụ nsogbu na-aka njọ na data eguzosi ike n'ezi ihe na-adịghị eme chebe site mbanye. Ezie na diagnostic nwere ike na-agba ọsọ n'ihi na nke a ihe ọjọọ oru njirimara bụ ihe ịrịba ama ka nchegbu banyere.
Iju ụda pụta nke ike mbanye mgbe ụfọdụ mgbe PC ma ọ bụ laptọọpụ agbanwuru. A kpọmkwem ụda na nke a na-mara dị ka click nke ọnwụ na ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere nke iduga ike mbanye mgbanwe na ike na-ahuta ka a ihe ịrịba ama nke ike mbanye ịghọ nwụrụ anwụ anya.
Ọ bụrụ na ndị dị mkpa faịlụ na-azọpụta na-ebe nchekwa mgbe ahụ data ga-azọpụta site na-esonụ ọ bụla nke ndị na-esonụ dị ka e nwere Ohere nke na-na data azụ a mebiri emebi draịvụ ike nakwa:
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ mebiri emebi ike mbanye na-enyocha mgbe kwesịrị ekwesị ọmụma e gbakọtara na nke a.
E nwere ọtụtụ data mgbake software omume nke na-ahụ na ihe ọjọọ ike mbanye na-natara na mkpa data a zoputara. Onye ọrụ nwere ike iwunye na-agba ọsọ ọ bụla dị otú omume.
Ma ọ bụrụ na nke n'elu mkpebi ada mgbe ahụ, ọ na-atụ aro iji nweta ọrụ enyemaka nke mere na nsogbu ahụ na-kpebiri na ọkachamara aka.
Ọtụtụ n'ime ndị mgbake software omume na-agbakwunyere na Smart data analysis a data na-akpaghị aka nọgidere na-enwe site OS na na draịvụ ike. Mgbe ike mbanye na-atụle site na njikọ ya na nke ọzọ n'ọdụ ụgbọ mmiri nke PC mgbe ahụ data na-agụ na e nwere ike azọpụta. Na ndị ọzọ okwu Smart data software arụnyere na ndị ọzọ usoro na-enyekwara mpụga ike draịva naghachi na-enweta data azọpụta.
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma software omume na a pụrụ iji jide n'aka na data si a nwụrụ anwụ ma ọ okokụre ike mbanye na-natara na a n'ụzọ na suut ọrụ. Nke a na usoro e mepụtara maka ọrụ nke ma tupu larịị na ndị na na-novice na ụwa nke kọmputa. Ọ na-na-kwuru na ihe kasị mma na-nyere ka ọrụ dị ka data mgbake nwere ike ịbụ 100% n'aka mgbe a omume na-eji. Na ọkaibe na mfe atụmatụ Wondershare Data Iweghachite na-ahụ na nanị ole na ole clicks na-mere na nke a na data na-natara n'egbughị oge. The ọkachamara mode ma ọ bụ faịlụ mgbake nhọrọ bụ otu nke kasị mma atụmatụ nke ike-eji enweghị ihe ọ bụla hassle na ọ bụ otu n'ime ndị na-Njirimara na-abụghị nanị na otuto site ọrụ ma onye ọ bụla nke asọmpi nke Wondershare na-àjà ndị dị otú ahụ ngwọta. Usoro ihe omume na-eme ka n'aka na data na-natara si ma ide na SATA ike draịva N'ihi ya ọ bụ dakọtara na niile bụ isi ụdị na ndị dị na ahịa. The faịlụ na ụdị na-akwado site na omume na-foto, PDF, ụlọ ọrụ faịlụ na ndị niile dị mkpa akwụkwọ a onye ọrụ nwere ike na-eche nke. Ọ na-eme n'aka na data mgbake na-mere na-enweghị na ling emee N'ihi ya a mmemme otu nke kasị mma dị ka onye ọrụ fim.
File mgbake mode (Ọkachamara mode)
Nke a bụ ndị kacha nzọụkwụ nke e agbakwunyere n'ime omume a na ọ bụ n'ezie mfe iji. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ na ga-agbasoriri iji jide n'aka na needful a mere:
Ka anya dị ka usoro ihe omume na ulo oru ọkachamara ma ọ bụ faịlụ mgbake mode-egosi ebe ọzọ button bụ na-enwe:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na faịlụ ụdị na-ahọrọ na nke a:
Mgbe na-ahọpụta ndị miri Doppler na ebe si ebe faịlụ na-na-E natara ihe omume ga-agba ọsọ na ya na ga-agbake furu efu faịlụ na ala na afọ ojuju nke onye ọrụ:
Raw data mgbake ọrụ
Ọ nwekwara ike na-ahuta ka a atụmatụ na e agbakwunyere n'ime usoro ihe omume n'ihi na ndị niile ndị ọrụ na-nke tupu larịị. Iji jide n'aka na usoro a na-eme na nke kacha mma n'ụzọ na-esonụ na-atọ mkpa nzọụkwụ ndị a ga-soro:
Mgbe ihe omume ahụ na-agba ọsọ na onye ọrụ kwesịrị ka họrọ Standard mode> Raw faịlụ mgbake:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka họrọ nkebi si ebe mgbake bụ ka a mere:
A nzọụkwụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe kwesịrị ekwesị na ọnọdụ na-ahọrọ maka faịlụ ịzọpụta na naghachi button na-enwe iji jide n'aka na usoro na dechara. Ọ na-atụ aro ka mgbe ịzọpụta a faịlụ ka otu ọnọdụ ebe ọ na-efu:
> Resource> Draịvụ> Olee naghachi data si a mebiri emebi ike mbanye